Ratnanagar Online मेरो जित सुनिश्चित छ : बिमला दुवाडी (अर्न्तवार्ता) – Ratnanagar Online
मेरो जित सुनिश्चित छ : बिमला दुवाडी (अर्न्तवार्ता)
चितवन, वैशाख २७ । नेकपा एमालेबाट रत्ननगर नगरपालिकाको मेयरमा उमेदवारी दिएकी विमलादेवी दुवाडी भोट माग्न जनताको घरदैलोमा पुगेकी छन् । पाँच बर्ष उपमेयर भएर कार्यअनुभव बटुलेकी दुवाडी निर्वाचन जित्ने दृढ शक्तिका साथ नगरबासीको घरदैलोमा पुगेकी हुन । २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नगर परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित भएकी दुवाडी २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपमेयरमा विजय भएकी थिइन । २०६० सालदेखि मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गरेर न्याय सम्पादनमा अब्बल दुवाडी अहिले पनि जिल्ला अदालतको मेलमिलापकर्ताको सुचिमा छन् । २०४३ साल देखि नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध भएकी दुवाडी सोही बर्ष अखिल नेपाल महिला संघको सदस्य बनेकी थिइन । २०४७ सालमा पार्टीको साधरण सदस्य बनेकी उनी २०५५ सालमा एमालेको संगठिन सदस्यता लिएकी लिएकी थिइन । २०६० साल देखि एमालेको वडाकमिटी सदस्यहुँदै नगर कमिटी सदस्य,क्षेत्रीय कमिटीको सचिवालय सदस्य,क्षेत्रीय उपसचिव हुँदै अहिले जिल्ला कमिटी सदस्य हुन । अखिल नेपाल महिला संघ चितवनको सदस्य, सचिव,उपाध्यक्ष हुँदै दुवाडी अहिले जिल्ला अध्यक्ष हुन । रत्ननगरको विकासको सेरोफेरोमा रहेर दुवाडीसंग गरेको साक्षत्कार :
१) रत्ननगरका मतदातासंग कस्तो एजेण्डा लिएर जानु भएको छ ?
एमालेको नेतृत्वबाट मात्रै विकास सम्भव छ भन्ने कुरा आमा मतदाताहरुले बुझ्नु भएको छ । हामी स्पष्ट योजनाका साथ जनताको घरदैलोमा पुगेका छौं । यो पाँच बर्ष पनि रत्ननगर नगरपालिकामा एमाले नै सरकार चलाएको हो । यो अबधिमा हामीले नगर विकासका थु्रपै रचनात्मक काम गरेका छौं । बृद्धबृद्धालाई घरमै उपचार,निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा,किसानलाई अनुदानमा गाई,सुत्केरी पशुलाई भत्ता,ट्याक्टर खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान,सिचाईका लागि मोटर वितरण, रोजगारी सृजना गर्न विना धितो विना व्याज कर्जा लगानी गरेका छौं, यसलाई निरन्तरता दिँदै नगर विकासको लागि थप काम गर्ने योजना बनाएकी छु । झुवानीमा शिलान्यास गरेको वाटर किङडम निर्माण सम्पन्न गर्ने छु । वडा नं १२ मा इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन गर्ने छु । टिकौलीमा कृष्णसार ल्याउने योजनालाई निर्वाचित भए लगतै पूर्णता दिने छु । सौराहाको पर्यटनलाई व्यवस्थित गर्दै निकुञ्ज टिकटलाई तीन दिनको बनाउने छु । सफारीको लागि प्रयोग हुने हात्ती चरनको लागि निकुञ्जसंग सहकार्य गरेर अगाडी बढाउने मेरो योजना छ ।
२) तपाईले निर्वाचन जित्ने आधार के के हुन ?
मैले निर्वाचन जित्ने धेरै आधारहरु छन् । पाँच बर्ष उपमेयर भएर गरेको काम मेरो पहिलो निर्वाचन जित्ने आधार हो । न्यायिक समितिको संयोजक भएर सयौं मान्छेलाई न्याय दिएको छु । म दावाका साथ भन्छु न्यायका लागि लड्ने म चितवनकै पहिलो महिला हु । रत्ननगरमा एमालेले बनाएको प्रतिबद्धता पत्रमा समावेश गरेका विषयहरु निर्वाचन जित्ने आधार हुन । एमाले अहिले पनि जनताको माझमा लोकप्रिय पार्टी हो । बृद्धबृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने पार्टीको रुपमा स्थापित एमालेबाट मैले मेयर पदमा उमेदवारी दिएकी छु । नगरबासीहरु सुर्यमा मतदान गर्न आचुर हुनुहुन्छ । म जित नजिक पुगेकी छु ।
३) निर्वाचन जितेपछि तपाईले गर्ने पाँच मुख्य काम के के हुन ?
मैले सुरुमा सुकुमबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्नेछु । हामीले केहीलाई निस्सा वितरण गरिसकेका छौं । अब निस्सा होइन रातो पूर्जा दिनु पर्छ । दोस्रो कुरा सौराहामा पर्यटकीय बसपार्क बनाउने छु । सेवाको गुणस्तर सुधारसंगै सौराहामा पूर्वाधारको अभाव छ । सौराहामा सुचना केन्द्र स्थापना देखि सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नेछु । गरिव तथा विपन्न समुदायको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने छु । बृद्धबृद्धाहरुलाई घरमै उपचार गर्ने कामको सुरुवात गरिसकेका छौं । अब महिलाहरुको प्रजनन् स्वास्थ्यको उपचारको लागि निशुल्क व्यवस्था मिलाउने छु । रत्ननगरमा मातृशिशु अस्पताल एक बर्ष भित्र सञ्चालनमा ल्याउने छु । नगर भित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्नेछु ।
४) एमालेमा फुटको असर छ,यसले तपाईको विजय यात्रामा अबरोध गर्ने सम्भावना कति छ ?
तपाईले भने जस्तै एमालेमा फुटको अबसर केही देखिन्छ । एमाले स्थापित पार्टी पनि हो । यो पार्टीप्रति जनताको आर्कषण उत्तिकै छ । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मैले सानदार मत प्राप्त गरेकी हु । यो नगरमा म नेताको रुपमा भन्दा पनि न्यायमुर्तिको रुपमा चिनिएकी महिला हु । पाँच बर्ष उपमेयर भएर काम गर्दा मैले पार्टी हेरेर कसैलाई भेदभाव गरिन,त्यही कारणले पनि सबै दलमा आस्था राख्ने मतदाताहरुले मलाई मतदान गर्नु हुने छ ।
५) नेपाली कांग्रेसबाट मेयर पदका उमेदवार भन्दा तपाई आफुलाई कति बलियो मान्नु हुन्छ ?
पार्टीगत रुपले हेर्दा हामी प्रतिस्पर्धी हो तर सम्बन्धको हिसावले हेर्दा हामी आमा छोरा हौं । हामीमा एकदमै निकटता छ । पार्टीले अघि सारेपछि निर्वाचन लड्नु पर्दो रहेछ । हामी दुबैमा सदभाव छ । मैले निर्वाचन जित्ने लगभग लगभग पक्का पक्की जस्तै छ । प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर आकलन गर्न मैले मिल्दैन । मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दा अहिले सम्म मैले आफ्नो प्रतिस्पर्धी नै देखेको छैन् ।
© 2020, Ratnanagar Online | All rights reserved. | Powered by: KOsYs Monday 05-23, 2022, 1:54 pm